Sodana Miady Amin’ny VIH/SIDA Aorian’ny Vanim-Potoana Islamista · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jolay 2017 7:25 GMT
(Marihina fa nivoaka tamin'ny jolay 2007 ny lahatsoratra tamin'ny teny anglisy nadika)
Miasa ao amin'ny minisiteran'ny fahasalamana, proigramam-pisorohana ny SIDA ao Khartoum i zizou from Djerba, bilaogera toniziana.
Manoratra i Zizou fa tsy tahaka ireo mpifanolo-bodirindrina aminy ao avaratra,” ary efa mizotra mankany fisokafana amin'ny hevitra maoderina “post-Islamista” sahady i Sodana.
Natolony ho porofon'izany ny saripikan'iray amin'ny mpiara-miasa aminy, ny tavany saronan'ny Niqab, mamaky lahatsoratra akademika momba ny pelaka sy lesbiana ao Rosia :
Liana amin'ireo mponina marefo,indrindra fa amin'ireo lehilahy efa nanao firaisana tamin'ny lehilahy ilay mpiara-miasa amiko. Efa nanao famakafakana momba io lohahevitra io aza izy ary nanao antsafa (anaty Niqab) homosexuels lahy sy vavy mihoatra ny zato.
Tsy misy tsara kokoa atao ho ohatra mihoatra noho ity zatovovavy ity iresahana ny vanim-potoana post-islamista amantarana an'i Sodana. Tsy tahaka ireo arabo mpifanolobodirindrina aminy ao avaratra izay tsy mitsaha-mihavariana amin'ny islma politika. Efa nihoatra sahady ny vanim-potoana islamista Sodana. Tsy alahelovana mihitsy izany vanim-potoana izany ary tsy mampahatsiahy afa-tsy zava-dratsy tamin'ireo olona nihaonako.
Natoky izany anefa ny Sodaney… ny fampiharana ny Sharia, ny islamo ho vahaolana amin'ny zava-drehetra… saingy nandiso fanantenana ny vokatr'izany politika izany ary nihamafy noho ny teo aloha ny fiainan'ny Sodaney lahy sy vavy… ary finaritra ny ankamaroan'ny sodaney nandray ny rivo-pisokafana izay efa nitsoka nandritra ny taona vitsivitsy sahady.
Faingana i Zizou nilaza fa na dia efa mitsoka amin'ny faritra sasany aza ny liberalisma, dia mbola miraikitra lalina amin'ny fomban-tany ny fiaraha-monina Sodaney, zavamisy izay mahasarotra ny asany sy ny programa miompana amin'ny SIDA. “Fisokafan'ny maso! Saingy tsy be loatra!…tahaka ny tsy ho azo tanterahina mihitsy ny miresaka fifadiam-piraisana mankany amin'ny fampiasana fimailo,” hoy ny nosoratany.
Saingy nametraka ny fanantenany ao anatin'ny “vain'afo” mangilohilo ao anatin'ny “lavenona” izy, tahaka ilay mpiara-miasa aminy mirakotra Niqab, izay nilaza fa tsy hanao voaly intsony rehefa mandany lalàna mitovy amin'ny an'ny frantsay handrarana an'io i Sodana.